DHAGAYSO:Somaliland oo war culus kasoo saartay dekadda Ber-Bera & DP World kadib markii…. – Puntlandtimes
DHAGAYSO:Somaliland oo war culus kasoo saartay dekadda Ber-Bera & DP World kadib markii….
March 17, 2019 W LAASCAANO
HARGEYSA(P-TIMES)- Maamulka Somaliland ayaa war kasoo saaray qarqad cabasho ah oo ay u gudbisay Shirkadda DP World ee maamusha dekadda magaalada Berbera taasi oo ku aadan in cashuur kordhin lagu sameeyay badeecadaha iyo alaabaha ay ganacsatadu kala soo degaan dekada.
Wasiirka Wasaaradda warshadaha, ganacsiga iyo Dalxiiska Somaliland Maxamed Xasan Sacad oo shir jaraa’id u qabtay warbaahinta ayaa sheegay in Somaliand ay aqbashay warqadii cabashada ahayd ee u soo gudbisay Shirkadda DP World isla markaasna ay tahay mid saxan.
Sidoo kale waxa uu sheegay wasiirka in DP World ay ka dalbadeen lacagaha ay ka qaadayan ganacsatada ku qaado qiimaha suuqa, waxaana uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay qaadashada amarkaas hadii kalena ay dhakhsi ula baxaan alaabaha dhex yaala dekadda magaalada Ber-Bera.
Ganacsatada ayaa sheegtay in aysan u hogaansami doonin go’aanka kasoo baxay DP World, waxaana hakad weli ku jira shaqooyinkii laga qaban jiray dekadda kadib markii ganacsatadu ay joojiyeen waxyaabihii ay kala soo dagi jireen.